aluminium foloraydh aluminium trifluoride
(trung) (dib u eeg)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Al + 3F2 → 2AlF3
Waa maxay xaalada falcelinta Al (aluminium) kaga falcelisa F2 (fluorine)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa AlF3 (aluminium trifluoride)?
Al wuxuu la falgalayaa Fl
Dhacdada Al (aluminium) ka dib waxay la falgashaa F2 (fluorine)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Al + 3F2 → 2AlF3
Su'aalaha la xidhiidha alaabta AlF3 (aluminium trifluoride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee AlF3 (fluorine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AlF3 (aluminium trifluoride) alaab ahaan?
(la soco) (ha ahaato xám)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2F2 + Si → SiF4
Waa maxay xaaladda falcelinta F2 (fluorine) ee ay la falgasho Si (silikon)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa SiF4 ()?
Silicon (Si) wuxuu si toos ah ula falgalaa fluorine (F) xaaladaha caadiga ah
Dhacdada F2 ka dib (fluorine) waxay la falgashaa Si (silikon)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga SiF4, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Si (silikoon), la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2F2 + Si → SiF4
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee SiF4 (silikon)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh SiF4 () badeecad ahaan?
3F2 + 2 Fe → 2FeF3
foloraydh birta Ferric fluoride; Iron (III) fluoride; Iron (III) trifluoride
(la soco) (sax ah) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3F2 + 2Fe → 2FeF3
Waa maxay xaaladda falcelinta F2 (fluorine) ay kaga fal-celiso Fe (iron)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeF3 (Ferric fluoride, Iron (III) fluoride; Iron (III) trifluoride)?
Fe waxa uu kaga falcelinayaa F2
Dhacdada F2 ka dib (fluorine) waxay la falgashaa Fe (iron)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3F2 + 2Fe → 2FeF3
Su'aalaha la xidhiidha alaabta FeF3 (Ferric fluoride; Iron (III) fluoride; Iron (III) trifluoride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee FeF3 (birta)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeF3 (Ferric fluoride, Iron (III) fluoride, Iron (III) trifluoride) badeecad ahaan?
Fluorine gá wuxuu si fudud ugu oksay karaa biyaha heerkulka caadiga ah iyo uumiga kulul ee gubta markuu taabto gaaska fluorine-ka